Uluhlu lweeNtengiso Abathathi-nxaxheba boLwazi lwe-RealtyWW -Ntengiso yeNtengiso yePropathi
EyeKhala 01, 2017 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Claz.org Uvimba wolwazi ugciniweyo. Emva kweenyanga ze-10 zophuhliso kunye nokuvavanywa kwe-beta Claz.org sele ilungele ukuvala isikhewu phakathi kwabathengi babucala kunye nabapapashi bezentengiso ngokuzisa iziphumo ezivela kwiindawo ezingaphezu kwe-200 zokushicilelwa, amaphephandaba endawo kunye neeforamu. Inomdla wokuthatha ukukhangela kunye nokukhangela kwizigidi ezidwelisiweyo ukuya kwinqanaba elilandelayo ngokudibanisa uluhlu lweempawu eziluncedo ezichazwe kumxholo wentengiso ohleliweyo.
IOodle.com yindawo yentengiso ekwi-Intanethi esekwe eSan Mateo, eCalifornia. Yasekwa kwi-2004 ngabagwebi bangaphambili u-Craig Donato, uSc K Kister no-Faith Sedlin. I-Oodle okwangoku yeyona mikhulu idrafti, kwaye idibanisa uluhlu olusuka kwiindawo ezifana ne-eBay, ForRent.com, i-BoatTrader.com, kunye noluhlu lwasekhaya olusuka kumaphephandaba asekuhlaleni nakwiiwebhusayithi. U-Oodle uhlanganisa uluhlu olusuka kwimithombo yelizwe neyasekhaya, egubungela imimandla ye-1000 e-United States, e-UK, Canada, e-Iland nase-India.
zhongan.com yindawo ehleliweyo kumazwe angaphezu kwe-60 kwilizwe lonke esenza ukuthengisa okanye ukuthenga kwalapha kumnandi. Ifanitshala esetyenzisiweyo, iimoto, amagumbi agcweleyo, kunye nezifundo zekatala - Yivenkile yokumisa enye ukufikelela kuluntu lwakho kwaye ugcine / wenze imali ngokukhawuleza!
buza.com i-Askalo yindawo yokukhangela yokukhangela yearhente yokuthengisa izindlu, iimoto kunye neendidi zemisebenzi kwihlabathi liphela. I-Askalo yenjini yokukhangela iimoto, imisebenzi kunye namakhaya. Sisebenza kunye kunye neesayithi ezichongiweyo kwiwebhu iphela ukuzisa kuzo zonke iintengiso oya kuzifuna kukhangelo olunye olulula.
Kwi-Askalo unokwenza uphando oluthile olunikezela iziphumo ezifanelekileyo. Kwaye emva koko unokuthelekisa ukubonelela kwaye ufumane elona xabiso lihle kunye neninzi yokhetho olubekelweyo.
Worldpropertyjournal.com ikwiindaba zentengiso yezezindlu kunye nolwazi lweshishini-kwihlabathi liphela.
Ngeeofisi zenkampani kuzo zombini iMiami, eFlorida naseIrvine, eCalifornia, iWPJ yincwadi yehlabathi jikelele efunda 'iphepha learhente yokuthengisa izindlu nomhlaba', ipapasha, isasaza, kwaye idibanisa uluhlu lwemihla ngemihla malunga neendaba zokuhlala, ezorhwebo kunye nezendawo zokuthengisa, ukuthengisa kunye neenkcukacha zeshishini sisiseko sehlabathi.
Ijenali yeNdawo yePropathi yeHlabathi kungoku nje ikwindawo ye #1 ebekwe kwindawo ye 'Global Real Estate News' emhlabeni namhlanje nguGoogle nabanye abaninzi.
I-Globalistings.com lukhula ngokukhawuleza uluhlu lwezinto ezikukuthengiswa kwezindlu kwi-intanethi olukhula ngokukhawuleza kwinombolo ethi #1 Uluhlu lweeNdawo zePropathi yeHlabathi Indawo esehlabathini namhlanje nguGoogle! Kuba siphila kwihlabathi elixhumeke kakhulu kwihlabathi, injongo yethu kukunxibelelanisa abathengi bezindlu, abatyali mali kunye nabaqeshi kwihlabathi liphela nabanini bepropathi kunye nabathengisi (ekuhlaleni naseluntwini jikelele) ngendlela engenamthungo nefanelekileyo kunangaphambili. Itekhnoloji kunye neendlela ezintsha zeshishini. Eyona nto iphambili kuthi-siyinkampani yezobuchwephesha behlabathi yokuthengisa izindlu nomhlaba enikezelwe ukwakha eyona ethembekileyo kunye neyona ethengisayo yokuthenga / ukuthengisa / ukutyala / yokuqasha amava omsebenzisi akhoyo naphi na kwimarike yehlabathi namhlanje - nangomso.
kwindlu yonke Yonke indlu yindlu yokukhangela yokuthengisa izindlu nomhlaba eyenzelwe ukwenza inkqubo yokufumana ipropathi kwi-intanethi ibe lula kumsebenzisi. Imephu yokhetho olukhulu lweminikelo ekhoyo kwi-intanethi kwindawo enye yolwazi ngokubanzi ngokubhekisa uluhlu olusuka kwiibhodi zezindlu kunye neziza ezinkulu zepropathi. Sebenzisa ujongano olukhawulezileyo noluthe ngqo, abasebenzisi banokubuza le database kwaye bazigcinele ingxaki yokuhambela indawo nganye nganye. Iminikelo ngokwayo ayixhaswanga yi-Yonke indlu kwaye abasebenzisi bahlala bejongwa kuludwe lwangempela. Okona kufanelekileyo kukuba, yonke indlu isebenza njengomqhubi wendlela ukuya kwezi ndawo. Inethiwekhi yethu yenjini yokukhangela ijikele ngaphezu kwamazwe e-90, ineendlela ezahlukeneyo eziguqulelwa kwiilwimi ze28.
global-free-classified-ads.com Iintengiso ezihlawulelwayo zasimahla yindawo yentengiso ye-intanethi yokwenziwa kwezindlu, iimoto, amathuba eshishini, iintengiso zezilwanyana ezifuywayo, njl. Sebenzisa inkqubo yethu yokufaka simahla kwi-intanethi yokuthumela iintengiso zakho zasimahla namhlanje!Indawo ityelelwa ngokubonakalayo ngamakhulu abathengi bemihla ngemihla kunye nabathengisi abavela eUnited States, Canada, United Kingdom nakwamanye amazwe eHlabathi liphela. Sibeke umzamo omkhulu wokuqinisekisa ukuba abathengi bethu kunye nabathengisi ngokufanayo banendawo yokudweliswa kwezinto kwaye bafumana ezona zinto zithengiswayo. Abathengisi baya kufumana inkqubo elula, yokudweliswa, kunye nokukwazi ukufaka iifoto ngohlu lwabo.
I-ClassifiedAds.com yindawo yeentengiso ekwi-sahlulwe simahla kwiimoto, imisebenzi, izindlu nomhlaba, nayo yonke enye into. Fumana into oyikhangela okanye udale eyakho intengiso mahala! Ngokungafaniyo nezinye iiwebhusayithi ezininzi zentengiso, iClassifiedAds.com yi-100% mahala ukuba isetyenziswe. Simahla ukuthumela intengiso, simahla ukukhangela uluhlu, simahla kuqhagamshela abathengisi. Sityala ixesha elininzi kunye nomzamo wokubeka iliso kunye nokuhlutha umxholo othunyelwe kwiwebhusayithi, ukuze uqiniseke ukuba uza kufumana kuphela umgangatho, uluhlu olufanelekileyo. Injongo yethu ku-ClassifiedAds.com kukwenza kube lula ukuthenga okanye ukuthengisa nantoni na.
renjungle.com I-Rent Jungle yindawo ekhokelayo, ekhangela kwi-intanethi yokukhangela kwizindlu eziqeshiswayo. Yasungulwa kwi-2010, indawo yaphuhliswa ngokuphendula isikhephe kwimakethi: kwakungekho ndlela ilula, engenazintlungu yokufumana zonke uluhlu lwezindlu eziqeshwayo kwindawo enye. Irenti yeJente ilungiselelwe ukulungisa le nto, isenza ukuba ibe ngumsebenzi wethu ukunceda abazingeli beeflethi kunye nabaphathi ukuba baphume behamba "ngehlathi" elikwi-intanethi lezindlu eziqeshiswayo kwaye ekugqibeleni banxibelelane ngokulula.
cheapapartmentslocator.com Yaziswa ngoMeyi we-2011, indawo yokuhlala enexabiso eliphantsi yeyona ndawo ilungileyo kwi-Intanethi ukufumana amagumbi asezantsi kunye nezindlu eziqeshisayo. Silapha ukwenza indawo yokuzingela iiflethi ibe lula kwaye imnandi, kwaye sihlala sikwiphulo lokufumana izindlu ezifikelelekayo.
zlibazka.com Irente Zonke izindlu zizindawo zokuqala zokufumana izindlu eziqeshisayo kwi-Intanethi. Indawo inikezela kakhulu kuludwe lokukunceda ukuba ufumane ikhaya lakho elitsha ngokukhawuleza, kwaye yenza ukunxibelelana kunye nokuhamba ungene kwikhaya lakho elitsha elinomoya. Usebenzisa itekhnoloji yeenjini yokukhangela, Qasha Zonke izindlu ukhangela olonahlu lubalaseleyo lwezindlu, amacebo okucoca izindlu kunye neeyunithi zokuthengisa, kwaye ubeka yonke into kwimephu elula ukuyisebenzisa. Ngokunciphisa ukukhangela kumakhaya aqeshisayo kuphela, ufumana uluhlu oluhle kakhulu lokukunceda ufumane ikhaya elitsha.
I-Rayasem.com Yindlela yokukhangela ethe nkqo kwiintengiso ezichongiweyo, okwangoku kugxile kwizakhiwo kwaye kungekudala iya kuvula ngakumbi ii-verticals ezinjengeemoto kunye nemisebenzi. Okwangoku esebenzayo e-Indonesia kungekudala iza kuphehlelela kwamanye amazwe asempuma mpuma yeAsia, iYurophu kunye neLatin America. URayasem wamiselwa ngoMeyi 2017, kwaye isekwe eJakarta, eIndonesia. Yindlela esebenzisekayo yomsebenzisi kusetyenziswa isicatshulwa simahla, umsila omde kunye nophando olusekwe kwindawo.
flatfy.com Ibizwa ngokuba nguFlatfy, inkonzo iyinjini yokukhangela yokuthengisa indawo yokuhlala kunye nokunikezelwa kwerente, kunye nabasebenzisi abakwaziyo ukucoca iziphumo ngexabiso, indawo, indawo, kunye nezinye izinto. Inkonzo igubungela amazwe e-10 ukuza kuthi ga ngoku, enye i-15 icwangciselwe ukuza kwi-intanethi kungekudala.
Imisebenzi ye-Adzuna yinto yokukhangela kwiintengiso zomsebenzi ezidwelise wonke umsebenzi, naphina. Injongo yethu kukuba yeyona ndawo intle yokuqalisa ukufuna umsebenzi. Sikhangela amawaka amawebhusayithi ukuze unganyanzelekanga ukuba uze kunye nezigidi zeentengiso ukuze ufumane wonke umsebenzi, naphi na, ngokusebenzisa Adzuna. Sinikezela ngeendlela zokukhangela ngobuchule kunye nedatha enamandla malunga nentengiso yomsebenzi, sikunika ulwazi oludingayo lokuthatha ulawulo lomsebenzi wakho.
Yiba liqabane lethu lodweliso
Ukuze ube liqabane lethu lomanyano kunye nokufumana ukutya kwe-xml nceda uqhagamshelane nathi kule dilesi ye-imeyile [Imeyile ikhuselwe]
okwenyaniWW Julayi 1, 2017
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Uluhlu Ukuhanjiswa, Uluhlu lweSyndication, Uluhlu loLuhlu lweeWebhusayithi zeeal, Uluhlu lweNtengiso yoLwakhiwo, Iinkonzo zoDweliso lweeNdawo eziHlalwayo, Unxibelelwano lwentengiso yearhente, IiWebhusayithi zoSetyenziso lweSakhiwo. Bookmark le Permalink.